बजेट बहस : पुरा नहुने कुरा धेरै राखेर बजेट पुस्तिका फोहोर नबनाइयोस् – Rajdhani Daily
काठमाडौं अर्थविद्हरुले संघीयता बलियो बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेटविशेष साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले भने,‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर भयो ।’ संघीयताको आभाष नहुने बजेट ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ ।
अब सरकारले प्राथमिकता ताेक्नुपर्छ : डा. विमल कोइराला
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेट आउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
पपुलिष्ट र महत्वकाँक्षी हुनुहुन्न : डा. चन्द्रकान्त पौडेल